Indawo ebanzi kwaye ekhululekile ye studio.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAndres Marcelo
Indawo yokuhlala yestudio enesitayile esiphezulu. Ngomnyango ozimeleyo kunye nobumfihlo obupheleleyo. Ikhululekile kakhulu kwaye ipholile kakhulu, ilungele ukuphumla kude nengxolo yombindi wesixeko. Igumbi lokuhlambela elizimeleyo, umoya womoya, ikhitshi, iTV.
Imizuzu nje eli-10 ukusuka kumbindi wesixeko. Indawo yokuhlala ethule kakhulu kwaye ekhuselekileyo. Izimele ngokupheleleyo kwaye ilungele izibini ezifuna ukuphumla kunye nokuqhawula kubomi bemihla ngemihla.
Kude kwingxolo kunye nemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka kumbindi wesixeko. Iindlela ezininzi zokungena. Ikhuseleke kakhulu kwaye ineevenkile ezinkulu ezikufutshane kakhulu kunye ne-intanethi cafe isiqingatha sebhloko kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Andres Marcelo
Konke ukufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho.